Wasiirka Amniga Puntland oo ka warbixiyay Howlgalo ay Sameeyeen ciidamada Amaanka – SBC
Wasiirka Amniga Puntland oo ka warbixiyay Howlgalo ay Sameeyeen ciidamada Amaanka
Wasiirka Amaanka Puntland Gen Khaliif Ciise Muedan ayaa shir saxaafadeed uu ku qabtay xarunta madaxtooyada Dowlada Puntland ee magaalada Garoowe ayaa waxa uu ka waramay howgalo ay qaadeen ciidamada Amaanka Puntland kuwaasoo ay ku soo qabteen Sarkaalkii ugu sareeyay ee kooxdii ku dagaalameysay Buuraha Galgala, isalamrkaana uu wasiirku ku sheegay in uu ahaa Maxamed Siciid Atam Walaalkiis oo lagu magacaabo Axmed Siciid Atam.
Waxa uu tilmaamay wasiirku in howlgalkaasi markii ay ciidamadu qaadayeen uu ahaa mid sahlan islamarkaana ay warbixin ka hayeen sida uu hadalka u dhigaye.
“Ciidamada Amaanka Puntland, waxa ay weerar ku qaadeen tuulo ku taala buurahaas Golis meel ay ku shirayeen niman Alshabaab ah, waxayna meeshaa ku qabteen nin la yiraahdo Axmed Siciid Maxamed oo la dhashay Maxamed Siciid Atam” ayaa uu hadalkiisa ku sheegay wasiirka Amaanka Puntland .
Wasiirku sidoo kale waxa uu ka warbixiyay Rag dhalinyaro ah oo la soo qabtay kuwaasi oo uu sheegay in ay yihiin Burcad badeed ayna ciidanka police-ku Kormeer ay ku sameeyeen deegaano xeebta ku yaala ay ku soo qabteen .
Waxa uu intaasi raaciyay wasiirka Amniga in ragaasi la soo qabtay ay gaarayaan 11 qof iyo qalab ay ka mid yihiin jaran jarooyin lana gubay dooni ay wateen iminkadana ay ku xiran yihiin xabsiga magaalada Garoowe .
Sidoo kale wasiirku waxa uu ka warbixiyay Dooni dhowaan ku degtay xeebaha ku dhow deegaanada Puntland kuwaasi oo dadkii saarnaa qaar ku dhinteen halka kuwo kalena ku soo caariyeen Degmada Laasaqoray.
Waxa uu sheegay wasiirku in dadkaasi ay ahaayeen dad tahriibayay islamarkaana waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoona u sheegay in ay wax ka qabtaan arimaha noocaas ah .
Jaalle Wasiir maxuu yahay amniga laga hadlayaa wadankaad u tahay wasiirka amniga waxaa labada gees ka dagaalamaya S.land iyo UNC.Ammaan ma waxaad u taqaaniin markaan Boosaaso iyo Garoowe dad lagu dilin?Kama wado ammaanku wuu xun yahay,laakiin uma dhawa saas ku sheegtaan.Adiga iyo Ina Faroole kama hadashaan dhibaatooyinka ka jira mudug.Waxaadna sheegada u badisaan Garoowe iyo Boosaaso.Saas haddaad ku sii wadaana waxay u daraan doontaa sii jiritaanka puntland.